Wednesday September 12, 2018 - 12:45:10 in Wararka by Super Admin
Ciidamo Mareykan ah iyo kuwo Soomaali ah oo wada socday ayaa xalay duullaan dheelmad ah ku soo qaaday deegaanka Mubaarak ee dhaca duleedka degmada Afgooye sida ay SomaliMeMo u xaqiijiyeen dad goobjoogeyaal ah iyo Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shaba
Ciidamo American ah iyo Maleeshiyaad Bangaraaf ah oo wada socda
Diyaarado helicopter ayaa ciidamadan ku soo dajisay afaafka hore ee deegaanka kadibna waxaa iyagoo lugeynaya soo aadeen dhanka magaalada si ay halkaas howlgal kaga fuliyaan balse inta aysan soo gaarin halkii ay kusoo socdeen ayey la kulmeen weerar kamiin ah oo ay diyaariyeen Mujaahidiinta.
Dagaalyahannada Xarakada Al-Shabaab oo u muuqday in ay ka warhayeen duullaanka ayaa dhabagal qorsheysan u diyaariyey ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida taas oo keentay in lagala hormaro weerarka kadiska ah.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa noo sheegay in ay maqleen jugta qaraxyo xoogan oo uu ku bilowday weerarka iyo israsaaseyn in muddo ah socotay oo halkaas ku dhexmartay labada dhinac taas oo keentay in ay ciidamadii duullaanka ahaa si habqan ah goobta uga cararaan.
Goobjoogayaal saaka booqday goobihii lagu dagaalamay ayaa sheegay in ay arkeen meydadka laba askari oo ay ka carareen ciidamadii soo weeraray deegaanka kuwaas oo ku labisnaa qalabka iyo dareeska ciidan ee lagu yaqaano ciidamada fuliya howlgallada gaarka ah.
Hal goobjooge ayaa noo sheegay in uu arkay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo goobta ka qaadaya meydadka askartii lagu dilay weerarka iyo qalabkii ay ka carareen, wuxuuna carrabaabay in mid ka mid ah askarta uu jirkiisa aad u burbursanaa.
Saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab oo aan la xiriirnay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyey in ay weerarkii xalay ay ku dileen qaar ka mid ah askartii soo weerartay deegaanka balse wey ka gaabsadeen in ay noo sheegaan jinsiyadahooda.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kale noo sheegay in wadada ay dib ugu gurteen ciidamada huwanta ah lagu arkay dhiig, faashado, iyo jaranjarooyin iyo qalabyada ay xirtaan ciidamada gaarka ah.
Lama oga illaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas mana jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africa iyo maleeshiyaatka Soomaalida ee garabka siiya balse waxaan isku dayi doonaan inaan idiin soo gudbino faafaahinada weerarkaas oo dhameystiran.
Al Shabaab Oo Weeraro Khasaara dhaliyay ka geysatay Kismaayo iyo Afgooye.